के गर्ने यदि तपाईंको बिराला सुगन्धित आँखा छ भने Noti बिरालाहरू
के गर्ने यदि तपाईंको बिराला सुगन्धित आँखा छ भने
हाम्रा प्यारी साथीहरूले कहिलेकाँही हामीलाई अनौंठो डर दिन्छ। एक दिन तिनीहरू पूर्ण रूपले स्वस्थ छन्, दौडँदै छन्, जम्प गर्दै छन् र बिरालाहरू सबै गरिरहेका छन् कसरी गर्ने जान्दछन्, र अर्को दिन उनीहरू तिनीहरूको बहुमूल्य आँखामा समस्याहरूको साथ उठ्छन्। निस्सन्देह, यी परिस्थितिहरूमा हामी चिन्तित छौं, किनभने उनीहरूलाई आँखाको समस्या हुनु सामान्य छैन र वास्तवमा यो धेरै पटक हुन्छ कि हामी कसरी कार्य गर्ने भनेर जान्दैनौं, विशेष गरी यदि यो पहिलो पटक हो जुन तपाईंलाई यस्तो भएको हो।
तपाइँलाई मद्दत गर्न, म वर्णन गर्छु के गर्ने यदि तपाईंको बिराला सुगन्धित आँखा छ भने, र सबैभन्दा सामान्य लक्षणहरू र कारणहरू के हुन्।
1 लक्षण वा संकेत जसले हामीलाई आँखाको अस्वस्थता महसुस गराउँछ भन्ने बताउँछ
1.1 उसले आफ्नो पञ्जाले उसको आँखा खुम्च्याउन थाल्छ
1.2 सामान्य भन्दा अधिक झिल्का
1.3 डरलाग्दो आँखा
1.4 बन्द आँखा
1.5 आँखाको रंग परिवर्तन हुन्छ
1.6 उसका विद्यार्थीहरू परिवर्तन हुन्छन्
1.7 आँखा जसले बढावा दिन्छ वा यसको विपरितमा डूब्छ
2 आँखा सुलेको कारण बिरालाहरु
2.1 भाइरल संक्रमण
2.2 जीवाणु संक्रमण
2.3 फंगल (खमीर) संक्रमण
3 बिरालाहरूको आँखा सफा गर्न घरेलु उपचार
4 तपाइँ कसरी जान्नुहुन्छ कि यदि समस्या गम्भीर छ?
लक्षण वा संकेत जसले हामीलाई आँखाको अस्वस्थता महसुस गराउँछ भन्ने बताउँछ
बिरालाहरू पीडालाई सामना गर्न सक्षम हुन्छन् भन्दा हामी भन्दा उत्तम छ यो प्राय: समस्या मात्र आउँदछ जब समस्या गुनासो हुन्छ। तपाईंको आँखासँग समस्या भएको खण्डमा, तथापि, हामीलाई समयमै पत्ता लगाउन यो अपेक्षाकृत सजिलो हुनेछ किनभने यसको लक्षणहरू र / वा संकेतहरू हुन्:
उसले आफ्नो पञ्जाले उसको आँखा खुम्च्याउन थाल्छ
जब तपाइँ असहज महसुस गर्नुहुन्छ, तपाइँ पहिले के गर्नुहुन्छ एक पंजा चाट्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई आँखामा रगड्नुहोस् त्यो असुविधाको कारणले के हटाउन को लागी प्रयास गर्न प्रभावित।
सामान्य भन्दा अधिक झिल्का
जस्तै जब हामी हाम्रो आँखामा एक बरबरा ड्रप, नराम्रो महसुस रोक्न को लागी धेरै झिम्काउनुहोस्.
बिरालो खुशी वा उदासीले कराउँदैन, तर किनभने केहि यो भएको छ, जस्तै:
लैक्रिमल अवरोध: यो विशेष गरी पारसीहरू जस्तो सपाट अनुहारहरू भएका बिरालाहरूमा हुन्छ। यदि आँखा सफा राखिएन भने यसले संक्रमण हुन सक्छ।
संक्रमण: यो सेतो वा पहेंलो डिस्चार्जको साथमा हुनेछ र हेयरबलहरू आखाका वरिपरि पनि गठन हुनेछ।
कपाल वा अन्य असुविधा: यदि तपाईंले कपाल गुमाउनु भयो भने, धुलोको एक झिक, आदि। यो असुविधा र अत्यधिक फाडको कारण हुनेछ।
कोर्नियल अल्सर: यो स्क्र्याच हो जुन खेल खेल्दा वा झगडा गर्दा सामान्य रूपमा बिरालोले गर्दा हुन्छ।
केराटाइटिस: यो हर्पेस, ब्याक्टेरिया, एलर्जी वा फंगीले गर्दा कोर्नियाको सूजन हो।
आँसुको रंगमा निर्भर गर्दै, पशुसँग एक समस्या हुनेछ वा अर्को:
पारदर्शी: फाँसी बिग्रेको वा संक्रमित हुन सक्छ।
खाली गर्नुहोस्: यो सामान्यतया एलर्जीको लक्षण हो, तर यदि ती स्पष्ट छन् र आँखा रातो छ भने, यो नेत्रश्लेष्मलाशोथ हो।
सूजन आँखा संग म्यूकोसा: बिरालामा क्लेमाइडियोसिसको साथ नेत्रश्लेष्मलाशोथ हुन सक्छ।
धेरै आँसुको साथ जोडी, यसले सधै आँखा बन्द राख्दछ र थप रूपमा, यो अर्ध-छायादार ठाउँमा रहनेछ, प्रकाश देखि टाढा। यदि समयमै उपचार गरिएन भने यसले ग्लुकोमा जस्ता गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ।
आँखाको रंग परिवर्तन हुन्छ
यदि आँखाको सेतो पहेंलो हुन्छ भने, पशु पीलियाबाट पीडित हुन सक्छ। यो मेलेनोमा (क्यान्सर) को लक्षण पनि हो।
उसका विद्यार्थीहरू परिवर्तन हुन्छन्
यदि विद्यार्थीहरू सँधै स्थिर हुन्छन् भने, यो जलबिन्दुको चिह्न हो; उल्टो, यदि तिनीहरूलाई सानो राखिएको छ भने यो हुन सक्दछ किनभने आँखाको भित्री भित्र सूजन आयो.
आँखा जसले बढावा दिन्छ वा यसको विपरितमा डूब्छ
यदि यो बाहिर देखिन्छ, यो किनभने बिरालालाई ट्यूमर वा फोडा छ, वा जलबिन्दुबाट ग्रस्त हुन सक्छ; यदि यो डूब्यो भने किनकी कि त तपाईले तौल घटाउनु भएको छ, डिहाइड्रेटेड छ वा टिटेनस छ.
आँखा सुलेको कारण बिरालाहरु
जब हाम्रो साथीको आँखा फुलेको छ, यो किनभने त्यहाँ केहि सूक्ष्मजीव छ कि कारण भएको छ, कि त एक भाइरस, संयुक्त राष्ट्र च्याउ वा एक ब्याक्टेरिया.
मुख्यतया फिलिन हर्पेस भाइरसको कारणले गर्दा, यदि एन्टिबायोटिकको साथ समयमै उपचार गरिएन भने तिनीहरू देखा पर्न सक्छन् कोर्नियल अल्सर कोर्निया नै सुख्खा हुन को लागी, र आँखा पनि सुख्खा रहन।
यो सबै भन्दा साधारण हो। क्लेमाइडियोसिसको कारण, यसले कष्टकर र असहज पार्दछ नेत्रश्लेष्मलाशोथ यसका लक्षणहरूका साथ: बहेको नाक, जलन, र गम्भीर अवस्थाहरूमा, मुखको अल्सरको उपस्थिति। उपचारमा प्रभावित आँखामा एन्टिबायोटिक नेप्टिक मलम लागू गर्न, र जनावरमा मौखिक एन्टिबायोटिक प्रशासित हुनेछ।
फंगल (खमीर) संक्रमण
वातावरणमा क्रिप्टोकोकोसिस भनिने फ fun्गसको कारणले हुन्छ, जसलाई एन्टिफंगल औषधिहरूद्वारा उपचार गरिन्छ। प्रोभोक आँखाको फैलावट, परिधीय अन्धाeरेटिना को सूजन.
जब तपाईले याद गर्नुभयो कि तपाईको बिरालो ठीक छैन, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस् तपाईलाई सबैभन्दा उचित उपचार तपाईलाई दिनु पर्ने अवस्थाको रूपमा।
बिरालाहरूको आँखा सफा गर्न घरेलु उपचार
उसलाई पशुचिकित्सामा लैजान र उसले सिफारिस गरेको औषधिहरु को ब्यवस्थापन को लागी, घरमा हामी बिस्तारै उसको दृष्टि प्राप्त गर्न हाम्रो प्यारी लाई मद्दत गर्न सक्छौं। तेसैले, आँखा सफा गर्न को लागी, तपाइँ धुंध को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ (यहाँ उनीहरु बेच्छन्) क्यामोमाइल जलसेक संग गीला -कोठा को तापमान मा, जलाउन बिना, बीच3र4पटक एक दिन।
तपाइँ कसरी जान्नुहुन्छ कि यदि समस्या गम्भीर छ?
यो बिरालाले प्रस्तुत गर्ने लक्षणहरूमा भर पर्दछ। संक्रमण सँधै निश्चित लक्षणहरूको सेटसँगै देखा पर्दछ, जबकि यदि हाम्रो कपाल कुकुरको आँखा क्षेत्रमा मौरीले मार्छ भने, सूजन बाहेक अरू कुनै लक्षण देखा पर्दैन, जुन घण्टा वा केहीमा घट्नेछ केहि दिन। यो एकदम धेरै खुजली हुन सक्छ, र वास्तवमा, यदि अर्को दिन हामीले सुधार देख्दैनौं भने, यसलाई हेर्न पेशेवरलाई लिन सिफारिस गरिन्छ, तर यो संक्रमण जस्तो देखिने समस्या जस्तो गम्भीर हुँदैन।
अब र पछि अपसेटहरू रोक्नको लागि बिरालालाई खोप लगाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ ताकि यसको प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ रहनेछ र यसको प्रतिरक्षाको साथ यसलाई प्रभाव पार्न चाहने सूक्ष्मजीवहरूसँग लड्न तयार हुन्छ।
हामी आशा गर्दछौं कि यसले विशेष प्रकारले तपाईको सेवा पुर्‍याएको छ, र तपाईलाई थाहा छ तपाईको फ्यारीको आँखा किन फुलायो। याद गर्नुहोस् धैर्य, लाड, र उचित उपचार संग, पक्कै सुधार भन्दा पहिले तपाईं सोच्नुहुन्छ 😉।
लेखको पूर्ण मार्ग: Noti बिरालाहरू » बिरालाहरू » रोगहरू » के गर्ने यदि तपाईंको बिराला सुगन्धित आँखा छ भने
मोनिका सान्चेज भन्यो
तपाईंलाई संक्रमण, एलर्जी हुन सक्छ, वा कीराले टोकेको छ। यदि तपाईंले भोली सम्म सुधार देख्नुभएन भने, म उनलाई सिफारिस गर्दछु पशु चिकित्सकलाई कारण पत्ता लगाउन र उहाँलाई उचित मामलाको रूपमा उचित उपचार दिनुहोस्।
मोनिका सान्चेजलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते! म अलिकति डराएको छु, मेरो बिरालाको बच्चा २ र आधा महिना पुरानो छ, उनी एक स्टप र उनको कानको बिचमा फg्गस भयो, म उनलाई पशु चिकित्सकमा लगें र उनले मलाई लोशन लागू गर्न भने, मैले यो गरें तर उनको आँखा सुज्यो, यो च्यातिरहेको छ र रातो कुनै सुझावहरु छ? कृपया
करेनलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईले कुन कुरा गणना गर्नु भयो, यस्तो देखिन्छ कि समस्या आँखामा फैलिएको छ। जहाँसम्म, तपाई कुन औषधी लिनुहुन्छ वा दिईएकोमा निर्भर हुन्छ, यसले काम गर्न केहि समय लिन सक्दछ। तैपनि, यदि यो सुधारिएको छैन भने, फिर्ता लिनुहोस् यदि तपाईंले त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्‍यो वा यदि तपाईंलाई कुनै अन्य रोग छ भने।
मेरो बिरालोको बच्चा धेरै पटक खेलको रूपमा झगडा गर्छ, तर अब ती मध्ये एक सुगन्धित आँखा छ र उनको भित्री पलक बन्द संग उनी चिच्याउँछिन् र बाहिरबाट चिढचिन्नी छ, मलाई थाहा छैन कि अर्को बिरालोले उसलाई चोट पुर्‍यायो भने।
तपाईंको अन्य बिरालाले यसलाई खरोंच गरेको हुन सक्छ। सिद्धान्तमा, यो आफैले निको पार्नुपर्दछ, तर यदि तपाईले यो देख्नुहुन्छ कि यो आज वा भोलि बिग्रेको छ भने यसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्, किनकि यसको विशेष आँखा थोप्न आवश्यक पर्दछ।
नमस्ते, मेरो बिरालोले धेरै सights्घर्ष गर्दछ र सँधै कुनै चीजबाट घाइते हुने गर्दछ, आज बिहान उसको आँखा हरियो बलगम र उसको माथिल्लो पलकमा फुलेको थियो, जसरी मैले याद गरे कि उसको आँखामा आँखा झिम्केको छ, मैले उसको आँखालाई क्यामोमाइलले सफा गरें, मलाई थाहा छैन उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजान भने
Gemma लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि उनी शुद्ध छैन भने, यसलाई कास्ट्रेट गर्नका लागि सुझाव दिइन्छ। यस तरिकाले तपाईं शान्त हुनुहुनेछ र तपाईं धेरै समस्यामा पर्नुहुनेछैन।
आँखाको लागि, यदि यसले सुधार गर्दैन भने, हो, यो पशुचिकित्सकले हेर्नु पर्छ।
नमस्कार, मेरो बिरालोको दाहिने आँखा फुलेको छ, उनीको वरिपरि रातो रंग छैन, न तिनी रुन्छिन्, र उनले गुनासो गरेन। मैले उनलाई पशु चिकित्सकमा लगेको थिएँ र केही समय उनलाई दुई खोप दिए पछि उनले ठूलो स्वरमा मलाई थाम्न थाली, मलाई आशा छ कि यो सामान्य छ।
क्याथरिनलाई जवाफ दिनुहोस्
खोपले कहिलेकाँही दुष्प्रभाव पार्दछ। चर्को म्याउ यसको कारण हुन सक्छ।
स्पष्ट म्याफर भन्यो
नमस्कार, मबाट एक अभिवादन अभिवादन प्राप्त गर्नुहोस्
म चिन्तित छु मेरो बिराला रातो ब्यूँझियो र दाहिने आँखाले उज्यालो भयो र यसको अलिकता रातो रातो छ मलाई के गर्ने थाहा छैन र मसँग पशु चिकित्सकको लागि पशु चिकित्सक छैन।
Mafer franco लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं दुई चीज गर्न सक्नुहुन्छ:
- क्यामोमाइलको इन्फ्यूजन: तपाईं एउटा जलसेक बनाउँनुहुन्छ, र पानीलाई केही तताउन दिनुहुन्छ। तपाईं यसको साथ गज गन्ध र यसको आँखा माथि, बाहिर बाट बाहिर चलान।
-Physiological सीरम: तपाईं यसलाई फार्मेसीमा बिक्रीको लागि फेला पार्नुहुनेछ। यो जलसेक जस्तै तरिकामा लागू गरियो।
यो हरेक h-h घण्टा गर्नुहोस्। र तपाईंले केहि दिनमा सुधार देख्नु पर्छ। तर यदि होईन भने, त्यसोभए यो पशु चिकित्सकद्वारा जाँच गर्नु राम्रो हुन्छ।
हेलो मेरो--महिना पुरानो बिरालाको बच्चा, उनको आँखा फुलेको छ, उसले यसलाई बन्द राख्छ, तर जब उफ्रिन्छ वा खेल्न चाहन्छ, उसले खोल्छ र फेरि यसलाई बन्द गर्‍यो।
निनालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं भित्र केहि चीज हुन सक्छ जुन तपाईंलाई सताइरहेको छ। तपाईं आँखा सफा गर्न सक्नुहुन्छ क्याजोमिल इन्फ्यूजनमा ओलिएको धुपको साथ आँखा सफा गर्न सक्नुहुन्छ - जुन न्यानो छ, तर यदि यो सुधारिएको छैन भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्न यसलाई पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु।
नमस्कार, मसँग--महिना पुरानो बिरालाको बच्चा छ (मलाई उनको उमेर ठ्याक्कै थाहा छैन किनकि मैले उनलाई पाएँ) र उनी फुस्से र आन्तरिक परजीवीहरूले पूर्ण रूपमा आएका थिए, मैले उनलाई सम्बन्धित ड्रप दिएँ र स्पष्ट रूपमा सबै कुरा राम्रो छ ... हिजो राती उनले खेल्छिन् र उनि जहिले उफ्रिन् र उनी सधैं गर्छिन् र आज बिहान उनले निकै शुद्ध पारेकी छ र मैले पढेको छु कि यो पीडाको कारणले हुन सक्छ ... मैले उनलाई राम्ररी हेरेपछि मैले महसुस गरे कि उसको पारदर्शी डिस्चार्ज भएको आँखा एकदमै फुलिएको छ। धेरै सार्न चाहँदैनन् र उनको सास फेर्न थाल्यो, मैले उनको टाउको वरिपरि केहि जनता महसुस गर्‍यो र मलाई लाग्छ यो लिम्फ नोडहरू हो कि सुलेको छ तर मलाई थाहा छैन म के गर्न सक्छु, मसँग पशु चिकित्सक छैन। यस समयमा र म यो जान्न चाहन्छु कि त्यहाँ लक्षणहरू को लागी कुनै प्रारम्भिक निदान छ वा उसको पीडा र असुविधा शान्त पार्न मैले गर्न सक्ने केहि छ। पहिले नै धेरै धेरै धन्यवाद।
माफ गर्नुहोस् तपाईंको बिल्लीको बच्चालाई के हुन्छ भन्नेमा।
निदान केवल पशु चिकित्सक द्वारा गर्न सकिन्छ। तर म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं उसलाई कुखुराको ब्रोथ (प्याज वा लसुन बिना) दिनुहोस् उसलाई खाना खान प्रोत्साहित गर्न र, संयोगवश, पानी पिउनुहोस्। तपाईं उसलाई ल्याक्टोज फ्री दुध पनि दिन सक्नुहुन्छ, तर मात्र अन्तिम रिसोर्टको रूपमा; त्यो हो, यदि उसले सामान्य रूपमा पानी पिउन जारी राख्दछ भने, ठीक छ, तर यदि उसले पिउन छाड्यो, भने तपाईं उसलाई दूध दिन सक्नुहुन्छ।
नमस्कार, मलाई माफ गर्नुहोस्, म धेरै चिन्तित छु, मेरो बिरालो ठीक थियो, तर केही दिनदेखि ऊ सामान्य भन्दा धेरै पानी पिइरहेको छ, र आज जब म कामबाट आएको हुँ, उनका दुई पलकहरू फुलेका र रातो थिए।
Randy लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि बिरालोले सामान्य भन्दा धेरै पानी पिउँछ भने, यो हुन सक्दछ किनकि यसमा हार्मोनल समस्या (हाइपरथायरायडिज्म), मधुमेह र अन्यहरू छन्। म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु कि उनलाई सकेसम्म चाँडो पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्, ताकि ऊ निको हुन सक्छ र छोटो समयमा जस्तो सँधै समान रहन सक्छ।
मेरो बिरालो साढे चार महिना पुरानो हो, आज बिहान जब म बिउँझें मैले उसलाई देखे र उसको आँखा बन्द थियो र ऊ एकदम तल छ।
दिउँसो घण्टा तल प्लेट थाल्न थाल्छ र ऊ खुल्दैन जब ऊ खोल्दछ, म देख्छु उसको विद्यार्थी दाहिनेतर्फ सारियो र उसले त्यहाँ सार्दैन ...
उसले यसलाई सफा गर्न कोसिस गर्दछ तर दुखाइन्छ .. उसलाई के हुन सक्छ?
सोललाई जवाफ दिनुहोस्
हुनसक्छ उसले केहि हिर्कायो होला। जे भए पनि, पशु चिकित्सकले उसलाई देख्नुपर्दछ, मात्र केसमा।
अभिवादन, र प्रोत्साहन।
म धेरै चिन्तित छु किनभने मेरो बिरालाको बच्चा उसको सानो आँखामा सूजन आएको थियो र उनी पारदर्शी र पहेंलो स्रावहरू जस्तै चिनोगियास… उनीले आफ्नो सानो आँखा पूर्ण रूपमा बन्द गरी र छोइन् र मैले महसुस गरें कि उनको सम्पूर्ण आँखामा फुलेको थियो ... मलाई वास्तवमै यो छैन पशु चिकित्सकका लागि र म यो जान्न चाहन्छु कि यस क्षणमा मैले केहि गर्न सक्छु ... उनी करिब २ महिनाकी छिन, मलाई राम्ररी थाहा छैन किन मैले उनलाई भेट्टाएँ ... तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद
ठीक छ जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार ठीक छ।
तपाईलाई कन्जेक्टिवाइटिस हुन सक्छ। तपाई आँखालाई क्यामोमाइलले सफा गर्न सक्नुहुन्छ, सफा धुपको साथ प्रत्येक पटक, दिनमा3पटक।
नमस्कार, मेरो बिरालोको आँखा फुलेको छ र म रुन्छु र यसले दुख्छ र उसको आँखा सुस्त र are्ग हो, तिनीहरू सामान्य नीलो आँखा होइनन्।
म तपाईंलाई सिफारिस गर्छु उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्। रोग निदान गर्न र सबैभन्दा उचित उपचार दिनु उसको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
यदि उसको सुगन्धित आँखा छ भने, म उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु। यो धेरै सम्भव छ कि तपाईंलाई संक्रमण भयो।
अभिवादन र प्रोत्साहन।
ShyGirl (@ सानो_decoy02) भन्यो
नमस्ते, मलाई मेरो बिरालोसँग केहि शंका छ, ऊ साढे दुई वर्षको छ र सामान्यतया उसले आफ्नो आँखा संकुचित राख्छ (जुन मलाई थाहा छैन कि यो सामान्य हो कि होइन) तर केहि दिन अघि ऊ सूजनको दाहिने पलक लिएर घर आई। र थोरै स्राव, मलाई शंका छ कि केहि अन्य बिरालाले उनीलाई हिर्कायो, मलाई थाहा छैन पशु चिकित्सकलाई लैजानुपर्दछ कि उसलाई आफैं निको हुन को लागी पर्खनु आवश्यक छ कि छैन, किनकि उसको व्यवहार र मुडमा कुनै असर परेको छैन र उसले गर्दैन। खुजली देखिन्छ
ShyGirl लाई जवाफ दिनुहोस् (@ सानो_decoy02)
होईन, कुनै बिरालालाई सधैं आँखा चिम्लेर राख्नु सामान्य कुरा होईन। तपाईंसँग हुन सक्नुहुनेछ जब तपाईं कसैलाई हेर्नुहुन्छ जुन तपाईंले वास्तवमा सराहना गर्नुहुन्छ, तर तपाईंसँग सधैं यो हुँदैन। यदि तपाईंसँग यी छन् भने, यो यो हो किनभने तपाईं कुनै प्रकारको असुविधा महसुस गर्नुहुन्छ।
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजाऊ उसलाई बताउनको लागि वास्तवमै उसलाई के हुँदैछ, किनकि यस्तो हुन सक्छ कि उसलाई केही प्रकारको एलर्जी वा दुखाइ छ।
नमस्कार, बाह्र दिन अघि मैले सडकबाट एउटा बिच्छीको बच्चा उठाएँ। उनी आँखामा संक्रमणको साथ आइन् जुन हामीले इलाकाको चियाबाट सफा गरेर यसलाई स्राव गरेका बलगम हटाएर निको पार्न खोज्यौं।
आज बिहान ऊ आफ्नो आँखाहरू सुपर संक्रमित रातो संग जगाए, र उसले मुश्किलले आफ्नो देब्रे आँखा खोले; दाहिने आँखा खोल्ने बित्तिकै यो रातो थियो र बाहिरतिर फर्कियो। हामी उनलाई पशु चिकित्सकमा लग्यौं, उनीहरूले हाम्रोलागि थोपा पानी सिफारिस गरे, र घर पुग्ने बित्तिकै हामीले उपचार गर्न थाल्यौं।
मेरो प्रश्न हो, के संक्रमण संक्रमण पछि तपाईंको दाहिने आँखा फेरि सीधा हुनेछ? म पशु चिकित्सकलाई सोध्न बिर्सें।
Jhordana लाई जवाफ दिनुहोस्
हो चिन्ता नगर्नुहोस्। पुन: प्राप्ति हुनेछ 🙂
मेरो बिरालोले उसको आँखा च्यातिरहेको थियो र खुजली भइरहेको थियो, मैले सोच्यो कि यस्तो हुनेछ र ऊ सुधारिएको देखिन्छ र एक दिन उसले माउन्ट गरी घरको चारैतिर दौड्यो, उसको आँखा विस्फोट भएको थियो। त्यो घटना धेरै विरलै छ।
एरियानालाई जवाफ दिनुहोस्
माफ गर्नुहोस् तपाईंको बिरालोलाई के भयो त्यसको लागि
मलाई आशा छ यो अब राम्रो छ।
नमस्कार, हिजो मेरो बिरालो एक आँखा संग एक विचलित विद्यार्थी संग उठे र अप्ठेरोमा पर्यो र अलि चिच्यायो अब ऊ दिनभर सुतिरहेको छ र उसले आफ्नो आँखा मलाई दियो मलाई थाहा छैन म पशु चिकित्सकमा जान पर्छ वा म के गर्न सक्छु यसलाई निको पार्नुहोस्
यो पशुचिकित्सकलाई हेर्नको लागि सधैं उत्तम हुन्छ, विशेष गरी यदि यो "रातभरि" गरिएको छ। सम्भवतः, म तपाईंलाई एक आँखा ड्रप पठाउँछु र केही दिनमा तपाईं सुधार गर्नुहुनेछ। साहस 😉
नमस्कार, मेरो बिरालोले उनलाई नेत्रश्लेष्मलाशोश दियो र उसको देब्रे आँखा त्यो खोई रहेको छ भने उसको कोर्नियाले उसको सम्पूर्ण आँखा ढाकेको छ र मलाई डर छ कि उसले यो हराउन सक्छ, म के गर्न सक्छु?
Minerva लाई जवाफ दिनुहोस्
यसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानु उत्तम हुन्छ। दुर्भाग्यवश, तपाईं घरमा धेरै गर्न सक्नुहुन्न, तिनीहरूलाई क्यामोमाइल पानीले सफा बाहेक।
मैले बक्समा केही--दिन पुरानो बिरालाको बच्चा भेट्टाए, हामीले तिनीहरूलाई विशेष सूत्र र सबै चीजहरू खुवायौं, तर तिनीहरूमध्ये एक जना उसको दाहिने आँखाले ठूलो फुलेको देखेर जगायो र किनकि यो अझै बन्द छ, ऊ जान्न चाहान्छ कि यो गम्भीर छ कि छैन। ? हामीले उसलाई क्यामोमाइल इन्फ्युजनले सफा गरिसकेका छ। मैले उसको जलनलाई कम गर्न केहि लगाउन सक्छु, उसको व्यवहार सामान्य छ, ऊ meow गर्दैन।
तपाईंलाई एउटा लामखुट्टे वा अन्य कुनै कीराले टोकेको थियो।
गम्भीर सिद्धान्तमा म यो भन्दछु कि यो हैन, तर म यसलाई पशु चिकित्सकमा लिन सिफारिस गर्दछु। तिनीहरूले सम्भवतः तपाईंलाई सूजन कम गर्न मद्दतको लागि एक विरोधी भडकाउने क्रीम दिनेछ।
होआ मलाई मेरो बिरालोलाई केहि दिन अगाडि सहयोग चाहिएको थियो ऊ आफ्नो दाहिने आँखाको पलकमा सबै सूजिएको साथ हिंडिरहेको थियो र उसले खोल्न सकिन उसले अलिकता रगत पाएको थियो तर अहिले यो थोरै सुधार भएको छ तर पलकको माथिल्लो भागमा ऊ रातो देखिन्छ र म याद गर्दछु कि यसले उसलाई थोरै चिन्ता गर्दछ म उसलाई मद्दत गर्न सक्छु मैले उनलाई पशु चिकित्सकमा लगें तर म डाक्टरको उत्तरबाट विश्वस्त भएन
केन्यालाई जवाफ दिनुहोस्
माफ गर्नुहोस् तपाईंको बिरालोलाई के हुन्छ भनेर। म दोस्रो पशु चिकित्सा राय सोध्न सिफारिस गर्दछु, यदि तपाईले पहिले भनेको भनेकोमा तपाई सहमत हुनुहुन्न।
यो हुन सक्छ कि उसलाई कुनै चीज, वा केही रोगको एलर्जी थियो, तर त्यो केवल एक पेशेवरले भन्न सक्छ।
Dagma ramirez भन्यो
नमस्ते मेरो बिरालो मैले उसलाई नुहाई दिएँ, बुधवार र हिजोदेखि ऊ डराएको छ ... र आज दिउँसो मैले उसको आँखा च्यात्‍नलाई घेरें उसको पहिले नै दुई २ छ ... र हरेक तमतो म उसलाई नुहाउँछु ... तर ऊ प्रयोगको लागि प्रयोग गरिएको छ ... तर ऊ चक्रीय छ र ऊ जस्तो छैन र उसको आँखा पफ गर्दै छ !! ऊसँग के हुन सक्छ र उसको लागि के राम्रो हुन्छ ... किनकि यो मेरो बच्चाको हो र म उसलाई केहि खराब हुन चाहान्दिन ... केटीको रूपमा उहाँसँग यो छ ...
Dagma Ramirez लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई शैम्पूमा एलर्जिक प्रतिक्रिया हुन सक्छ।
केवल केस मा, तपाईं एक पशु चिकित्सक देख्नु पर्छ।
अलेक्सिया चमेली भन्यो
मेरो बिरालोको नीलो आँखा छ र अचानक निदायो र जब ऊ ब्यूँझ्यो उसको खैरो जस्तो पहेंलो आँखा थियो र यो सामान्य हो, उसले आफ्नो आँखा मात्र खोल्दैन र कहिलेकाहीं ऊ पागलजस्तो देखिन्छ।यसले मलाई दुःखी बनाउँछ जुन खतरनाक हुन सक्छ वा यसलाई क्यामोमाइलले हटाउन सकिन्छ? वा मँ अरू केहि गर्न सक्छु? .O (╯ □ ╰)
अलेक्सिया जाजमीनलाई जवाफ दिनुहोस्
यो हेपाटाइटिसको संकेत हुन सक्छ। तपाईंले उनलाई तुरून्त पशु चिकित्सकमा लैजानु पर्छ।
एन्जी पनेब्रा भन्यो
नमस्ते, म कसरी प्रश्न सोध्न चाहन्छु? यसले मलाई धेरै बेचैन बनाउँदछ 'मेरो--दिन पुरानो बिरालोको बच्चा छ जसको राम्रो आँखा छ र उसको आँखा अन्धकार छ त्यस भन्दा अर्कै अँध्यारो छ' उसको अरु दुई भाइहरू ज्यादै गम्भीर छन् ' 'तर ऊ आफ्ना भाइहरू मध्ये आधा हो' ऊ एकदम पातलो भएकोले धेरै शरीर भएको थियो, उसले थोरै मात्र खानेकुरा लिन चाहेनौं हामीले उसलाई दूध पियौं 'यद्यपि उसले मलाई उसको आँखाको चिन्ता गरिरहेको छ' के गर्न सकिन्छ सामान्य म यस अवस्थामा गर्छु? कृपया
एन्जी पनेबरालाई जवाफ दिनुहोस्
होइन, यो सामान्य छैन। बिरालाहरूको आँखा फुल्नुपर्दैन, विशेष गरी यदि ती सानो छ भने।
तपाईं गल्तिले आफ्नी आमा द्वारा खरोंच गरिएको हुन सक्छ, वा कीराले काट्यो।
म उनलाई परीक्षाको लागि पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु।
परी Vidal भन्यो
के तपाई मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो बिरालाको बच्चा भित्र सूजन आँखा छ, उनी धेरै आँसुछिन् र बस खोल्छिन्, मैले क्यामोमाइल इन्फ्यूजन प्रयास गरें, तर यसको कुनै परिणाम आएको छैन।
एन्जिल Vidal लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई माफ गर्नुहोस् कि किट्टीको गलत आँखा छ।
के तपाईंलाई थाहा छ यदि उसले आफैंमा वा कसैले कसैलाई खरानी गरेको छ - वा अर्को जनावरले उसलाई चोट पुर्याएको छ। उनलाई धूलोबाट एलर्जी हुन सक्छ वा उनीसँग इरन्ट्रेन्टको साथ सम्पर्क छ?
बिरालाले थुप्रै कारणले च्यात्नु सक्छ: संक्रमण, अल्सर, एलर्जी।
यदि क्यामोमाइलले कार्य गर्दैन भने, पशुचिकित्सकको जाँच गर्नु राम्रो हुन्छ र तपाईलाई आफ्नो केसको लागि विशेष आँखा थप्नुहोस्।
विलियम्स गेलभिज भन्यो
नमस्ते, मेरो १-महिनाको बिरालोले आन्तरिक पलक आफ्नी आमाबाट खेर फालेको छ, यसले रगत बहाउँदैन वा आँसु बहाउँदैन तर पहेलो डिस्चार्ज हुन्छ, यसले पलक बन्द गर्न सक्दैन र आँखा पनि फुलेको छ र मसँग केही छ शंका, यो सामान्य निको वा तपाइँ एक अपरेशन को आवश्यकता छ? र पनि, यो राम्रो देख्नेछ वा देख्दैन?
विलियम्स गाल्भिजलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लाग्दैन मलाई एउटा अपरेसन चाहिन्छ, तर मलाई आँखा झिक्न आवश्यक छ ताकि घाउ राम्रो भईरहेको छ, र सबै भन्दा माथि छिटो।
तपाईको सल्लाहका लागि धेरै धन्यबाद 😀
तपाईलाई धन्यवाद, विलियम्स 🙂।
नमस्ते, मेरो बिरालोको आँखामा अलि बढि तेस्रो पलक छ र बढ्दो रातो, यो के हुन सक्छ? र के तपाईं यसको कारण आफ्नो आँखा गुमाउन सक्नुहुन्छ?
Selene लाई जवाफ दिनुहोस्
अर्को बिरालोले दिएको खरोंचको कारण बिरालाको तेस्रो पलक सुन्न सक्छ, एक विदेशी शरीर, एक एलर्जी, अरूको बीचमा।
मलाई लाग्दैन उसले आफ्नो आँखा हराउनेछ, तर म उनलाई सिफारिस गर्दछु कि उनलाई जाँचको लागि पशु चिकित्सकमा लैजाऊ। उसलाई थाहा छ कि उहाँसँग के छ र यसलाई कसरी व्यवहार गर्ने भनेर।
नमस्ते! ठीक छ, मसँग एक प्रश्न छ। मसँग दुईवटा बिरालाहरू छन्, ती दुबै चंचल छन् र आज जब म मेरो घरमा आइपुगेँ, मैले उनलाई हेरें कि उसको एकजनाको आँखामा एउटा खरोंच भएको छ, र ऊ अलि बढि सुगन्धित र बादलमा देखिएको छ, र म ठान्छु कि उनकी बहिनी एकदम नराम्रो खेल्यो। उनीसँग र उनलाई टोक्दछन्। के यो पुन: प्राप्ति हुनेछ? फेरि देख्नुहुनेछ? सत्यले मेरो चिन्ता गर्दछ कि उसले देख्न सक्दैन।
सामन्थालाई जवाफ दिनुहोस्
यसलाई दिनको 3-4-। पटक क्यामोमाइलले सफा गर्नुहोस्। त्यसैले यो सम्भव छ कि यो आफैमा निको हुनेछ healing
जे भए पनि, यदि तीन दिन बित्यो र उनीले सुधार गरेन भने, म उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु।
नमस्कार, शुभ अपरान्ह, म मेरो बिरालाको बच्चाको बारेमा चिन्तित छु, उहाँ १ महिना र days दिन पुरानो हुनुहुन्छ किनकि रातमा बिहानसम्म उनले आफ्नो सानो आँखालाई लागगासँग बन्द गरे जस्तो लाग्छ कि लागाले यसलाई बन्द गर्यो।
तपाईंले आफुलाई कुनै चीजमा चोट पुर्‍याएको हुन सक्छ, वा तपाईंको गुलाबी आँखा हुन सक्छ।
म यसलाई क्यामोमाइलले सफा गर्न सिफारिश गर्दछु, दिनभरि चार वा पाँच पटक सफा धुप प्रयोग गरेर।
यदि ऊ तीन दिनमा सुधार गर्दैन भने, आदर्श रूपमा उनी पशु चिकित्सकले हेर्नु पर्छ।
राम्रो साहस, र धैर्य, कि आँखा समस्याहरू निको हुन धेरै समय लिन सक्दछ।
नमस्कार, म सहयोगको लागि सोध्न चाहन्छु, आज मेरो बिरालाको बच्चाले उनलाई उनको आँखाले सूजिएको र केही रगतले रातो देखेको छु जस्तो कि मानौं यो छतमा छ, कोही छिमेकीले यस्तो चीज गर्यो जुन मैले देख्न सकें ... मसँग पशु चिकित्सकलाई समातेर लैजान मलाई स्रोत छैन .. कृपया!
रॉड्रिगोलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं यसलाई क्यामोमाइलको जलसेक बनाएर सफा गर्न सक्नुहुन्छ र आँखा सफा गर्नका लागि यस पानीमा गजलाई भिजाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईंलाई थाहा हुनु पर्छ यो सम्भावित रूपमा अस्थायी समाधान हो।
यो पशुचिकित्सक हेर्न उत्तम हो। म पशुचिकित्सक होईन र म तिमीलाई दुबै औषधी दिन सक्छु कि तिमीले उसको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउन सक्छौ, मलाई माफ गर्नुहोस्।
उनीहरूले तपाईलाई किस्तामा भुक्तान गर्न अनुमति दिन्छन् कि जान्न को लागी एक पेशेवरसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, वा पशुको संरक्षणमा उनीहरूले तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्छन् कि भनेर हेर्नका लागि।
धेरै, धेरै प्रोत्साहन।
मेरो बिरालाको एउटा आँखाको स्याउ मात्र एउटा रेखा र अर्को गोलो आँखाको छ
तिम्रो स्वास्थ्य कस्तो छ? कुनै कुराले तपाईंलाई शicious्कास्पद बनाउँदछ केवल पशु चिकित्सकले देख्नु पर्दछ, मात्र केसमा।
नमस्कार, म चिन्तित छु मेरो बिरालोको दाहिने आँखा फुलेको थियो र हामीले यस समयमा कुनै पशु चिकित्सक भेट्टाएनौं
म के गर्न सक्छु? मँ धेरै चीजहरु पढ्छु, केहि कपडाको अलावा गर्न सकिन्छ
तिम्रो बिरालो कस्तो छ?
घर बाट दुर्भाग्यवश तपाईं उसलाई शान्त राख्ने प्रयास गर्न भन्दा बढी गर्न सक्नुहुन्न र क्यामोमाइलमा ओसिलो एक धुपको साथ उसको आँखा सफा गर्नुहोस्।
नमस्कार, आज म बिउँझिएँ र देखें कि मेरो बिरालोको आँखा मेरो बिरालोको लागि केही अपारदर्शी थियो, यस्तो देखिन्छ कि यसले दुख्छ र उसले आफ्नो आँखा बन्द राख्छ। 🙁
तपाईं यसलाई क्यामोमाइल (इन्फ्यूजन) मा moistened सफा धुपको साथ सफा गर्न सक्नुहुनेछ, तर यदि यसले केही दिनहरूमा सुधार गरेन भने पशुचिकित्सकलाई हेर्नु राम्रो हुन्छ।
पालोमा एरोयो गाबाल्डन भन्यो
मैले भर्खरै मेरो बिरालोको बच्चालाई उठाएँ। ऊ महिनाको अन्त्यमा पुग्दैन, तर म धेरै चिन्तित छु किनभने उसको सानो पानी आँखा छन्, ती मध्ये एकले यसलाई अलिकता खुला राख्छ तर अर्कोमा यो अलि बढि फुलेको र पूर्ण रुपमा बन्द छ, उसलाई सफा गर्दा पनि। त्यो एक खैरो पदार्थ छ भनेर महसुस गरे।
म के गर्न सक्छु? म धेरै चिन्तित छु म यो सानो आँखा हराउन वा नराम्रो हुन चाहन्न।
जब हामीले उनलाई उठीयौं, हामीले याद गर्यौं र उसका दुईजना भाइले पनि आफ्नो आँखा बन्द बनाए।
कृपया सहयोग गर्नुहोस्!
Paloma Arroyo Gabaldón लाई जवाफ दिनुहोस्
यति सानो छ कि, यो जरुरी छ कि तपाइँ उसलाई पशु चिकित्सक को लागी, विशेष गरी यदि उनका भाइहरु पनि बिरामी छन्।
आज मैले मेरो बिरालोलाई हेरें कि उसको एउटा आँखा अलि बन्द छ र जब मैले विवरण हेर्न नजिक गएँ मैले यो याद गरे कि विद्यार्थीको गाढा हरियो रंग छ। र सामान्यता यो थियो कि यसमा कालो थियो। के हुन सक्छ? र मैले के गर्नुपर्छ?
नमस्ते जुआन डेभिड।
तिमीले उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानु पर्छ। उसलाई थाहा हुन्छ कि तपाइँसँग के छ र यो कसरी व्यवहार गर्ने भनेर।
तपाईंले पशु चिकित्सकमा लैजानु पर्छ। तपाईंलाई केहि रक्तस्राव हुन सक्छ, तर केवल उसले तपाईंलाई बताउन सक्छ।
हेलो, के हुन्छ मसँग 3-महिना पुरानो बिरालाको बच्चा छ तर ऊ आँखाको जलनबाट ग्रसित छ र अब उसको आँखा ज्वलन्त भइरहेको छ, यसको अर्को उपाय के हुन सक्छ ?????
तपाईं उसका आँखाहरू सफा धुराको साथ सफा गर्न सक्नुहुन्छ क्यामोमाइल इन्फ्यूजनले दिनमा तीन पटक।
यदि ऊ एक दुई दिनमा सुधार भएन, वा यदि उनी बिग्रन्छ भने, म उनलाई सिफारिस गर्न पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु।
युलिथ carvajalino भन्यो
शुभ दिउँसो। के हुन्छ मेरो बिरालोको तल्लो पलकको एक छेउमा सूजन आउँदछ र खुजलीयुक्त हुन्छ र प्राय: झिमझिम बल्कन्छ। यो के हुन सक्छ। तपाईको जवाफ को लागी धन्यवाद
Yulieth carvajalino लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंको आँखामा पट्टी वा तपाईंको आँखामा विदेशी वस्तु हुन सक्छ।
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु यो जाँच गर्न पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्।
हेलो मेरो बिरालोको बच्चाको आँखा फुसिलो र रातो छ म चिन्तित छु xmy बिराला २ महिना पुरानो भयो
यो सिफारिस गरिन्छ कि तपाईलाई चाँडो भन्दा चाँडो डाक्टरमा जाँच र उपचारको लागि लैजानुहोस्।
नमस्कार, कृपया तपाई मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? मेरो पुरानो बिरालोले मेरो सानो बिरालोको आँखा स्क्र्याच गर्दछ र यसको आँखामा बिन्दु हुन्छ, यसले पनि धेरै गर्छ।
डानिएलालाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि उसलाई जाँच गर्न र उपचार गर्न पशु चिकित्सकमा लैजाऊ।
क्यामिला डायज भन्यो
नमस्कार, मलाई माफ गर्नुहोस् तर म दुखी र डराएको छु किनकि मेरो बिरालोको बच्चाको अलि आँखा फुटिएको छ र उनी केवल २ महिना पुरानो छ, उनको आँखा डरलाग्दो छ र मलाई लाग्छ कि उनले आफ्नो दृष्टि गुमाएकी छन् तर म केवल यो जान्न चाहन्छु कि म कसरी गर्न सक्छु। कृपया उनको आँखा यो बन्द वा कि यो छोड्न छैन, कृपया मलाई भन्नुहोस्
क्यामिला डायजलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई माफ गर्नुहोस्, तर मँ भन्न सक्दिन। म पशु चिकित्सक होइन।
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि उनीलाई पशु चिकित्सकमा लैजाऊ, जसले तपाईंलाई कम्तिमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बताउँछन्।
बिरालोको बच्चा धेरै, धेरै जवान छ र जब उनलाई केहि खराब हुन्छ, तपाईंले छिटो कार्य गर्नु पर्छ।
Carina ghetie भन्यो
नमस्ते ... म धेरै चिन्तित छु, मेरो बिरालाले केही हप्ता अघि कन्जेक्टिवाइटिस (मलाई आशा छ कि मैले यसलाई सही रूपमा लेखेको छु) र जब उसको देब्रे आँखाले उसलाई पार गर्यो, यो बन्द भयो र फेरि रातो भयो, सुरुमा मैले सोचे कि यो नेत्रश्लेष्म रोग हो तर फेरि मैले भर्खर पढेको यो लाग्दैन ...
मलाई के गर्ने थाहा छैन, म पशु चिकित्सकबाट धेरै टाढा बस्छु र म छुट्टीमा १० दिनको लागि अर्को देश जाँदैछु, केही आफन्तहरूले उसलाई खुवाउन लागेका छन् तर अरू थोरै र मलाई डर छ कि केहि हुन्छ भनेर। उसलाई ...
मलाई थाहा छैन के गर्ने, कुनै सल्लाह छ?
Carina Ghetie लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाइँ उनीहरूको आँखाहरू सफा गर्न लगाउन सक्नुहुन्छ सफा गोज़लाई क्यामोमाइल इन्फ्यूजनले गीलो गरीएको छ, प्रत्येक आँखाको लागि एक गज प्रयोग गरेर। दिनमा तीन पटक मनपर्‍यो।
मलाई आशा छ कि यो राम्रो हुँदै जान्छ।
नमस्कार ... मेरो बिरालाले पाँच दिनसम्म पाँच बिरालाहरू थिए दस दिन अघि, ती सबै बिरालाको बच्चाहरू जन्मेका थिए आफ्ना साना आँखाहरू खुला साथ, दिनहरू बित्दै जाँदा तिनीहरू पछाडिबाट पहेलो डिस्चार्जको कारण अलि बन्द भए, तर एउटा बिरालोको बच्चा आँखा सकेट बाहिर आउँछ कि केहि उसको सानो आँखा धेरै नराम्रो देखिन्छ। म के गर्ने? म चिन्तित छु कि यो केहि गम्भीर छ, तिनीहरू धेरै बच्चाहरु हुन्।
तपाईं तिनीहरूलाई दिनको 3-4-। पटक पानी र क्यामोमाइलले सफा गर्न सक्नुहुनेछ, तर सबैभन्दा सिफारिश भने उनीहरूलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्।
नमस्कार, के कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छ, राम्रो हुन्छ के हुन्छ कि सडकबाट एक बिरालोको बच्चा मेरो घर आयो र राम्रोसँग, किनकि यो नछोडी, मैले यसलाई हेरचाह गर्ने निर्णय गरें तर स्पष्टतः यो आँखामा बिग्रिएको छ, योसँग छ आधा बन्द छ, यसले कहिलेकाँही खोल्छ, तर मैले याद गरे कि यसले पारदर्शीको रूपमा पदार्थलाई गोप्य राख्छ, मलाई थाहा हुँदैन यो के हो, बिरालाको बच्चा २ दिनमा मेरो घरमा मात्र आएको छ, म यसलाई पशु चिकित्सकमा लैजान्छु। यो जाँच गरियो? धन्यबाद, शुभ दिन
हो, यो निश्चित रूपमा सबै भन्दा सिफारिस गरिएको हुनेछ।
जे भए पनि, तिनीहरूलाई सफा गर्नुहोस् जबकि गजको साथ क्यामोमाइल इन्फ्युजनमा दिनको तीन पटक भिजाउनुहोस्।
माफ गर्नुहोस्, तर म पशु चिकित्सक होइन र म तिमीलाई भन्न सक्दिन।
म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि यसलाई पेशेवरमा लैजानुहोस्।
नेटाली भेगास भन्यो
नमस्ते, मेरो बिराला केवल months महिनाको मात्र हो र आज हामीले उनको आँखामा फुलेको देख्यौं, र धेरै आँसु भयो, मलाई थाहा छैन यो के हुन सक्छ र म धेरै चिन्तित छु :(
नाटाली भेनेसलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई जतिसक्दो चाँडो पशु चिकित्सकमा लैजानुहुन्छ। उसले तिमीलाई के गर्नु पर्ने बताउँछ।
Dilcia नवौं भन्यो
असुविधाको लागि माफ गर्नुहोस्, म जान्न चाहान्छु। तपाईंसँग मेरो किट्टीको लागि खानाको प्रकार छ पछि देखि। उसले चुप लाग्यो र उसको आँखामा हिर्कायो उसले खोल्न सक्दैन र जब हामी त्यसलाई खोल्दछौं उहाँ निलो हुनुहुन्थ्यो मानौं मैले उसको आँखा देख्न सकिन। तिनीहरू भ्फ्फ रंगका हुन् र म days दिनको बारेमा धेरै चिन्तित छु र मलाई डर छ कि उसले आफ्नो सानो आँखा गुमाउनेछ। मेरो देशमा त्यहाँ धेरै छैन
Dilcia ninet लाई जवाफ दिनुहोस्
माफ गर्नुहोस्, मँ उसलाई भन्न सक्दिन। म पशु चिकित्सक होइन।
हुनसक्छ ऊ हिट भयो, वा केही। सम्भव भएमा पेशेवरले हेर्नु राम्रो हो।
ठीक छ, मेरो बिरालाले करिब एक महिना अघि बिरालाको बच्चाहरू थिए, तर अहिले सम्म केवल एक जनाले उनको आँखा खोलेको छ, तर पूर्ण रूपमा होइन, म तिनीहरूलाई हरेक दिन देख्छु, र आज जब म एउटा बच्चालाई समात्छु, उसको आँखा फुल्छन्।
र सत्य के हो मलाई थाहा छैन के गर्ने, यो यस्तो छ कि यदि उसको आँखा पप आउट हुँदैछ र अर्को अझै बन्द छ तर खुला छ।
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्। म हैन, र मँ उसलाई के भयो भनेर भन्न सक्दिन।
आशा छ ऊ चाँडै निको हुनेछ।
नमस्कार, १ days दिन अघि मेरो बिरालामा २ पल्पीहरू थिए, तर हिजो जब मैले तिनीहरूलाई जाँच गरें, मैले देखें कि तीमध्ये एउटाको आँखा एकदमै फूलेको थियो, एउटा मार्बलको आकार, मैले नेकाइन (आमालाई आँखाको संक्रमण भएको थियो) तर म गर्छु मलाई थाहा छैन कि मैले यसलाई बच्चाको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्छ कि पर्दैन। मैले के गर्नुपर्छ?
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि बार्किबु.का पशु चिकित्सकहरूसँग परामर्श गर्नुहोस् (म होइन)।
तपाईले पेशेवरको सल्लाह बिना बिरालालाई स्व-औषधि सेवन गर्नु हुँदैन, किनकि यो अझ खराब हुन सक्छ।
हेलो मेरो बिरालोको आँसुबाट खुल्ला घाउ छ जुन रातो र पानीले बनेको छ र यो बनेको छ र खुवा झर्छ
गाईडालाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंलाई सिफारिस गर्छु कि उनलाई सकेसम्म चाँडो पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्। म हैन, र मँ उसलाई के भयो भनेर भन्न सक्दिन।
म आशा गर्दछु तपाईं छिट्टै नै निको हुनुहुनेछ
नमस्ते, मेरो बच्चाको बच्चाको बच्चा days दिन पुरानो छ र उसले हिजो आफ्नो आँखा खोल्यो, यो बाहिर भयो कि उसले आफ्नो दाहिने आँखा खोल्दा, उसको दाहिने आँखा एकदम फुलायो र यो एक तर्फ विकृत भयो, आज ऊ अन्य सूजनको साथ उठ्यो र पनि विचलित भयो, म के गर्न सक्छु? उसको अनुहार एकदमै फूलेको छ र उसको आँखाले उनीहरूलाई फ्ल्याशले हेरेको छ र तिनीहरू खरानी छन्
लुडमिलालाई जवाफ दिनुहोस्
म तिम्रो किट्टीलाई के हुन्छ भनेर माफ गर्नुहोस्, तर म पशु चिकित्सक होइन।
म तपाईंलाई एक पेशेवर मा यसलाई लिन सल्लाह दिन्छु।
राम्रो मेरो २-महिना पुरानो बिरालाको जहिले पनि एक आँखाले हरबखत शरारत पाएको हुन्छ र यसलाई खोल्न उसको लागि गाह्रो छ ... अर्को आँखा एकदम सही अवस्थामा छ र कहिले काहिँ त्यसले छुँच्छु जस्तो हुन्छ। यो के हुन सक्छ?
बार्बरालाई जवाफ दिनुहोस्
उसलाई चिसो हुन सक्छ, तर पशु चिकित्सकले मात्र यो बताउन सक्छ।
NoBoDy HeRe भन्यो
नमस्ते, मेरो बिरालाको बच्चा २ महिना पुरानो छ र यस सोमबारदेखि उसको आँखा फुल्न शुरू भयो र त्यसपछि यो देख्न सक्दिन कि उहाँ देख्न सक्नुहुन्न र लागा पनि छ, म उसलाई चियाले धुन्छु र उसलाई केहि पनि हुँदैन म दु: खी छु किनकि उसले चिसो समात्यो र हरायो। तौल र दुई साना पातहरुमा यो सूजिएको छ, मलाई दुखः जस्तो देखेर दु: खी लाग्छ
NoBoDy HeRe लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई माफ गर्नुहोस् कि तपाईंको किट्टी खराब छ
म एक पशुचिकित्सक होइन, तर पक्कै पनि बार्किबूबाट आएका व्यक्तिहरूले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छन्।
पशु प्रेमी भन्यो
नमस्कार, जानकारीका लागि धन्यबाद जसले मलाई मद्दत गर्यो। पहिले मेरो बिरालोको गुलाबी आँखा थियो र पछि आज म नुहाउँदा पनि यस्तो देखिन्छ कि उसले कालो आईलाइनर लगाएको छ। म धेरै चिन्तित भएँ - र मैले सोचे कि यो मेरो गल्ती हो कि उसलाई भयो तर मैले यो पृष्ठ भेट्टाए पछि मलाई सूचित र शान्त भइसकेको थियो।
पशु प्रेमीलाई जवाफ दिनुहोस्
एक साथीको बिरालाको बच्चाको अलि बढि सुगन्धित आँखा छ, र यसले केहि फाडिरहेको छ।
तपाईं उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजान सक्नुहुन्न तर के तपाईं त्यसमा केही राख्न सक्नुहुन्छ?
तपाईले गर्न सक्ने सबै यसलाई पानी र बाँझको धुंधसँग सफा गर्नुहोस्। तर आदर्श रूपमा यो पेशेवरले देख्ने छ, किनकि यसमा केहि पनि छैन, तर यो हुन सक्छ।
सबैभन्दा पहिले, यो धेरै चाखलाग्दो लेखको लागि र अरूले सोधेका प्रश्नहरूको साझेदारी र जवाफ दिनको लागि धन्यवाद। मेरो बिरालोको अलि फुलेको आँखा छ, उनी धेरै अति सक्रिय छ र केहि दिन अघि मैले थाहा पाएँ कि उनको आँखा फुलेको थियो। मलाई थाहा छैन यदि यो एक झटका वा आँखा समस्याको कारणले हो, अनौठो कुरा के हो भने ऊसँग क्रोन वा रातो आँखा छैन। तपाईको समय र सल्लाहका लागि अग्रिम धन्यवाद।
यो केवल एक टक्कर हुन सक्छ, तर यदि यो सुधार हुँदैन, वा यदि तपाईं यसलाई reddening, वा scratching देख्नुभयो भने, पशुचिकित्सकलाई हेर्नु राम्रो हुन्छ।
नमस्ते, मेरो बिरालोको एउटा रातो आँखा उसको रातो पलकमा छ, सम्भवतः चिढचिढिएको छ, उनको आँखा फुलेको छ (जस्तो कि थैलीको प्रकार फुलेको थियो) र जब यो कम गरिएको थियो यो आँखाको तल्लो भागमा लुकेको छ र मलाई थाहा छैन के गर्ने):
अदुवालाई जवाफ दिनुहोस्
हामी उनलाई एक चोटि हेर्न डाक्टरलाई लिएर जान सिफारिस गर्दछौं।
एउटा अटारी बिरालाले मेरो बगैंचामा २ बच्चा राख्यो जब मैले महसुस गरे कि उनीहरू मेरो बगैचामा थिए बिरालाको बच्चा लगभग १ महिना पुरानो हो ... एउटा बिरालोको बच्चा ठीक थियो तर पातलो थियो अर्कोमा पेटमा ठूलो बल थियो र उसको आँखा पनि सुपर थियो। बल जस्तै फूलेको छ ... मलाई के थाहा छैन के गर्ने किनभने तिनीहरू छिट्टै लुक्छन् र यसको आमाले पनि मलाई ती स्पर्श गर्न दिनुहुन्न ... 😣
भानियालाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईंले आमालाई ध्यान नदिनुहोस्, बिरालाहरूका लागि क्यान राख्नुहोस्।
नराम्रो आँखाको साथ त्यो बिरालाको बच्चा चीजहरू खराब हुन अघि पशु चिकित्सकले हेर्नु पर्छ।
मसँग ग्यास्ट्रिक बच्चा छ र मेरो भान्जाले उनलाई दाहिने आँखाको दिशामा प्रहार गरे
यो सूजिएको छ, यसले देखाउँछ
हामी उनलाई सकेसम्म चाँडो पशु चिकित्सकमा लैजाने सल्लाह दिन्छौं।
Angie diaz भन्यो
नमस्ते, तिमीलाई कस्तो छ? म चिन्तित छु, मेरो बिरालो6महिनाको छ र एक पल देखि अर्को दाहिने आँखामा तल्लो पलकमा पल्टियो, तर उसको कुनै डिस्चार्ज वा केहि पनि छैन, जब उसले प्रकाशमा देखिन्छ भने मात्र उसको अनुहार उफ्रन्छ र त्यसले मलाई डराउँदछ, शान्त हुन चाहन्छ
एन्जी डायजलाई जवाफ दिनुहोस्
माफ गर्नुहोस्, म तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दिन। यो उत्तम छ कि तपाईं उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्, ताकि उसले आफुले के छ र कसरी उसलाई व्यवहार गर्ने बताउन सक्छ कि उसले सुधार गर्छ।
बनाउँछ2हप्ता
नमस्कार, मसँग एक ५ बर्षे बिरालो छ, एक दिन बाट अर्को दिन सम्म, उनी आफ्नो फुलेको आँखा संग उठे, म उसलाई डाक्टरकहाँ लगे, उनीहरुले उसलाई थोपा र इंजेक्शन दिए, तर यो ४ दिन पछि थियो र उनी सुरुमा जस्तै थियो।
Alma लाई जवाफ दिनुहोस्
कहिलेकाहीँ उनीहरु निको हुन लामो समय लाग्न सक्छ। तर त्यो जो सबैभन्दा राम्रो जान्दछ पशु चिकित्सक हो।
यदि यो सुधार गर्दैन, संकोच नगर्नुहोस् यसलाई फिर्ता लिन को लागी यो तपाइँलाई के भन्नुहुन्छ हेर्न।
दुई बिरालाहरू हुने सल्लाहहरू
भिजेको बिरालो खानाको फाइदा